Markaad haysanayso beer weyn ama si fudud marxaladda koritaanka ee digaagga, waa wax aan loo baahnayn in lagu kalsoonaado digaagga cidla ah ee buulkaba, maaddaama boqolkiiba xayawaanku aanay sare u kicin kiiskan. Si loo xaliyo dhibaatadan qalab gaar ah oo gaar ah ayaa kaa caawin kara, kaas oo mudada wareegyada oo idil ay sii wadi doonto xaaladaha ugu wanaagsan ee horumarinta chicks.
Iskudhafka guud ee ukunta "ukunta" IPH 12 "
Kaabayaasha tayada waxay fududeeyeen oo hagaajinayaan shaqada beeraha digaaga ee taranta dhalinyarada yar yar. Adigoo u adeegsanaya gargaarkiisa, waxaad xaqiijin kartaa in digaagga uu ku fidi doono heerkulka ku habboon iyo qoyaanka, taas oo macnaheedu yahay in boqolkiiba tufiddu ay sare u ahaan doonto. Ka hor intaanad iibsan qalab loogu talagalay chicks ee taranta, waa in aad tixgelisaa dhowr noocyo, baaritaanka sifooyinka, farsameynta iyo dib u eegis.
Egger 88 tusmada ovubator ee ukunta
Qeybaha casriga casriga ah waxaa ka mid ah qalabka yaryar oo loogu talagalay in la soo saaro kooxo yaryar oo digaag ah, iyo noocyada warshadaha oo la soo saaro ilaa 16,000 oo qaybood. Egger 88 ayaa loogu talagalay beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay iyo beeraha shakhsi ahaaneed waxaana loogu talagalay inay isku darka ka baxaan 88 digaag.
Faahfaahinta soo-koobidda ukunta ee ukunta "AI 264"
Maanta, waxsoosaar, ukun hilib ah, digaagga la isku tallaabsaday ayaa kor u qaada caanaha. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinkoodu waa dareen xun oo ka yimaada ukunta, sababtoo ah inta badan beeralayda digaaga ee taranka shimbiraha ee tiro yar ayaa doorbidaya kulubka isticmaalka guriga. Mid ka mid ah aaladahaas oo kale waa habka tooska ah ee loo yaqaan "AI 264".
Jaangooyooyinka iyo hababka lagu xakamaynayo qoyaanka kuleylaha
Si aad u hesho chicks oo buuxa guriga, beerta digaagga u baahan yahay ma aha oo kaliya si loo hubiyo heerkulka la doonayo, laakiin sidoo kale si joogto ah loo xakameeyo qoyaan. Ka dib marka la barbardhigo, digaaga digaagga ee maskaxda waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee jawi raaxo leh. Inta badan sababta keenta dhimashada embriyaha waa gebi ahaan isbedel la'aanta qiyaasta qoyaanka ee caadada.
Dib-u-eegista masiibada ee ukunta "Bird"
Iskudhicii ugu horreeyay ee digaaggu wuxuu u muuqday Masar iyo Shiinihii hore. Waxay u oggolaadeen inay kor u qaadaan xoolaha digaaga beeraha, helaan hilib iyo ukun badan, iyo taranka digaagga ayaa joojiyay inay ku xirnaadaan tayada digaagga iyo waxyaabo kale. Beerta daaqa casriga casriga ah, isweydaarsiga waxaa loo isticmaalaa qoysaska nooca warshadaha iyo warshadaha.
Noocyada hygrometerka, mabda'a robotyada, sida loo sameeyo hygrometer gacmahaaga
Qoyaanku waa astaan ​​muhiim ah oo ku saabsan horumarka caadiga ah ee embriyaha u dhexeeyaha. Toddobaadka ugu horreeya ee ukunta, qiimaha waa in uu ahaado 60-70%, labaadna - in ka badan 40-50%, saddexaadna waa in uu aad u sarreeyo - oo aan ka yarayn 75%. Tilmaamahan waxaa lagu cabbiri karaa qalab gaar ah - hygrometer.
Xaaladaha casriga ah ee horumarinta warshadaha digaaga, qaabeynta masiibada waa arrin aad u muhiim ah. Si loo abuuro jawi raaxo leh wuxuu isticmaalaa aalado kala duwan. Sidaa darteed, isbeddelka heerkulka iyo qoyaanka waxaa lala socon karaa iyada oo la adeegsanayo psychrometer ama hygrometer. Aan u fiirsanno si faahfaahsan mabda'a ficilkooda.
Dib-u-eegid soo-qaboojinta ukunta "Blitz norm 72"
In beeraha digaagga waaweyn iyo beeraha yaryar, kululaynta waxaa loo isticmaalaa taranka. Beeraha digaaga, waa muhiim in la doorto mishiinka oo buuxin doona baahida loo qabo geedi socodka taranka, wuxuuna gacan ka geysanayaa kordhinta wax soosaarka. Tixgeli magaca baabuurka "Blitz norm 72", sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada.
Breeders ayaa soo bandhigay tiro badan oo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee lakabyada, laakiin, nasiib daro, ma aha dhammaan digaagga ee jinsiga ukunta ayaa sii haysan dareenka hooyada. Tusaale ahaan, digaagga Forvock waxaa lagu gartaa wax soo saar wanaagsan, laakiin waxay leeyihiin gebi ahaanba dareen aan lahayn. Sababtan awgeed, beeralaydu waa in ay sameeyaan naas-nuujintan oo aan sameyn karin iyada oo aan kobcin lahayn.
Labo ikhtiyaari oo lagu samaynayo kuleyliye guriga: fudud oo adag
Waxaa soo baxday in si loo jaro wax digaag ah, waxaa suurtagal ah in la sameeyo iyada oo aan ahayn oo kaliya adeega ukunta ukunta ee hen ah, laakiin sidoo kale iyada oo aan lahayn qoob-ka-shaqeeyaha qaali ah. Macallinka guriga wuxuu awood u leeyahay in uu si madaxbannaan u sameeyo qalab loogu talagalay ukunta, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si guul leh uga saarto digaagga kharash yar oo yar.
Dib u eegida sheeko xeeldheeraha ukunta ee Foratutto 54
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo ah iskubarro suuqa - laga bilaabo guriga ilaa xirfadle. Wakiil caan ah oo ka mid ah kuwa ugu horeeya waa Covatutto 54. Sharaxaad ka kooban Tusatutto 54 ayaa leh calaamada Novital, oo laga soo saaray Talyaaniga. Shirkadan ayaa soo saartay waxsoosaar beereed muddo ka badan 30 sano waxayna tixgelineysaa mudnaanta ugu weyn ee tayada wax soo saarka, nabadgelyada iyo hal-abuurka.
Tilmaan-bixinnada ukunta dhirbaaxada: sida loo leexiyo, sida badanaa loo leexiyo
Ku dhajinta ukun ee kulul, aqal kasta wuxuu doonayaa inuu helo digaag caafimaad leh oo digaag ah. Laakiin tani maaha mid ku filan inaad iibsato ama ku samayso kulul wacan oo leh gacmahaaga, qalabeysan oo kuleylka lagama maarmaanka ah, qaboojinta, nadaafada iyo nidamka hawada. Waxay soo baxday in ay ukumo u baahan tahay in ay fiirsato maalin kasta, ama halkii ay u rogaan.
Sidee loo sameeyaa kulubka ugu dhaqsaha badan si toos ah ukumaha ukunta
Haddii aad digaag u tarayso oo aad haysato dad badan oo shimbiraha ah, waxaad hubaal u baahan tahay in lagugu caawiyo. Waxay kaloo faa'iido u yeelan kartaa beeralayda digaaga kuwan oo kalluunkoodu ka luntay dareenka dhalinta. Oo haddii ay jiraan tiro yar oo digaag ah waxaad si fudud u iibsan kartaa qalab warshadeed oo soo saara, ka dibna unugyada leh awood weyn ayaa noqon doona qaali.
Dib-u-eegista maskaxda ee ukunta "Blitz Norma 120"
Haddii aad go'aansato in aad isku daydo inaad u noqoto sida digaaga digaaga, oo aanad aqoonin nooca kumbuyuutarka ee ku siinaya mudnaanta, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid moodooyinka waqtiga lagu imtixaamo ee uqalmaa badanaa jawaab celin wanaagsan. Muuqaal kale oo muhim ah waa qiimaha sicirka qiimaha. Kuwa soo socda ayaa sharraxaya qaabka qaboojinta oo leh sumcad wanaagsan waxayna bixisaa sifooyin wanaagsan oo qiime jaban.
Faahfaahinta kulubka tooska ah ee ukunta "BLITZ-48"
Nafaqeynta digaaga ayaa ah geedi socod kakan oo u baahan in badan oo xoog iyo dulqaad. Caawiye wanaagsan oo loogu talagalay beeraleyda digaaga waa kumbuyuutar, qalab farsamo oo karti u leh ilaalinta heerkulka looga baahan yahay hirgelinta. Waxaa jira baddalooyin badan oo ka mid ah qalabka ay sameeyeen shirkadaha kala duwan ee ajnabiga ah iyo kuwa gudaha.
Waqtiga guriga lagu nadiifiyo ee ukunta dhirta, habka, barista
Dhamaan beeralayda khibrada leh ee khibrada leh ayaa si fiican u ogyihiin in mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee ku-oolnimada ukumaha, marka lagu daro heerkulka iyo qoyaanka si sax ah loo doortay, waa xilligoodii xilligoodii. Oo waa in la sameeyaa iyada oo la raacayo tignoolaji adag oo qeexan. Dhammaan kulubooyinka hadda jira waxay u qaybsan yihiin saddex kooxood - si toos ah, farsamo iyo buug, iyo labada nooc ee ugu dambeeya waxay soo jeedinayaan in geedi-socodka ukunta aysan noqonayn mashiinka, laakiin nin.
Faahfaahinta qiyaasta ukunta ee ukunta "IPH 500"
Isticmaalka kuleyliyaha ee ukunta ayaa ka dhigi doona geedi socodka taranka taranka ee digaaga si sahlan oo faa'iido leh. Xitaa unugga ugu fudud ee suurtogalka ah ayaa suurtagal ah in la abuuro shuruudo wanaagsan oo koritaanka ilmaha uur-jiifka ah, si deg deg ah loo xoojiyo geedi-socodka hirgelinta iyo kordhinta mugga wax soo saarka. Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee casriyeynta casriga ah waa IPH 500.
Faahfaahinta qiyaasta ukunta ee ukunta IUP-F-45
In beeraha daaqa casriga casri ah oo aan qaboojiyayaashu samayn karin. Waxay yareeyaan kaliya kharashka shaqada iyo waqtiga, laakiin sidoo kale waxay kordhiyaan boqolkiiba inta hindida ukunta iyo dhalidda cunnooyinka caafimaad leh. Mid ka mid ah calaamadaha caanka ah ee la yaqaan waa IUP-F-45, waxaanan maanta eegaynaa. Qeexitaanka IUP-F-45 (kulubka hordhaca ah ee caalamiga ah) waxaa loogu talagalay in lagu daro ukumaha noocyada shimbiraha ah ee lagu beeray beeraha dhammaan dalal ku yaal cimilada iyo kulaylaha kulaylaha.